Democracy Vouchers Public Service Announcement - Somali / af Soomaali | seattlechannel.org
/ SeattleChannel.org / Democracy Voucher Program
Democracy Vouchers - Somali / af Soomaali
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Somali / af Soomaali
"Qoraalka Ogaysiiska Adeega Dad waynaha ee la turjumay"
Ma heshay Foojarada amd jeegagga Dimuqraadiyada (Democracy Vouchers)? Haddii aanad helin, weli waad codsan kartaa?
Magaalada Seattle (City of Seattle) waxay siinaysaa dadka deggan Seattle ee u qalma $100 oo ah Foojarada Dimuqraadiyada (Democracy Vouchers). Dadku waxay u isticmaali karaan foojarrada si ay u taageeraan murashaxiinta ka qayb gelaya ee u tartamaya Gollaha Magaalada Seattle ama Qareenka Magaalada.
Haddii aa u qalnto, waa inaad tahay qof degen Seattle, ugu yaraan 18 sano jir ah, oo mid uun Mudwaadin Maraykan ah, Wadani Maraykan ah, ama qof si sharci ah joogto ugu degen ("qof haysta green card").
Haddii aad tahay cod bixiye diiwaangashan, waxaad hadda ka hor heshay foojaradan.
Ma heli kartid foojaradaada? Ama ma jeclaan lahayd kuwaaga Foojarada Dimuqraadiyada (Democracy Vouchers) oo ku qoran luqaddo kala duwan? Waxaad codsan kartaa beddelka ama ku codso foojarada mid ka mid ah 15 luqaddood ee la heli karo. Nagala soo xidhiidh maanta lambarkan 206-727-8855. Caawimada luqadda waa la heli karaa.
Kumaad siin kartaa foojaradaada? Liiska buuxa ee musharaxiint ka qayb gelaya hadda waa la heli karaa. Booqo seattle.gov/democracyvoucher ama wac (206) 727-8855 oo codso turjubaanka luqaddaada.
Democracy Vouchers - English
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Amharic
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Cambodian / Khmer
Democracy Vouchers Public Service Announcement- Cantonese / 简体中文
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Filipino / Tagalog
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Korean / 한국어
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Mandarin / 繁體中文
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Oromo
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Russian / русский язык
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Spanish / Español
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Thai / ภาษาไทย
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Tigrigna / ትግርኛ
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Vietnamese / Tiếng Việt